Oovimba bePolkadot - Iphepha 5 le-5
IPolkadot (DOT) Iphula inqanaba le-28 leedola, inokuthi iqhubeke kwakhona ne-Uptrend
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 40, $ 42, $ 44
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 30, $ 28, iirandi ezingama-26
IPolkadot (DOT) Ixabiso leXesha elide leXesha: UkuHamba
Ngo-Matshi 20, IDOT Uzamile ukophula i-40 yokuxhathisa kodwa bagxothwa. Ngenxa yoko, iibhere zityhala i-crypto ukuya kwi-28 yeedola ezisezantsi. Oku kubangele ukophula uluhlu lwamaxabiso asezantsi. Inkxaso yakutsha nje ibambe njengoko iinkunzi zeenkomo zithenga iidiphu. Lo ngumqondiso wokurhweba kubarhwebi ababotshwe ngamanqwanqwa abanokuqalisa urhwebo olude kumaxabiso asezantsi. Olu rhwebo lunokuphuma kufutshane nendawo yokumelana. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi zeenkomo zijongana nokwaliwa kwindawo yokumelana, urhwebo olufutshane nalo lunokuqaliswa. Oku kungavalwa kufutshane nendawo yenkxaso. Olu rhwebo lunokwenziwa ngokungagungqiyo de imali iqhubeke ngokuhamba.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye. I-DOT iwele kwinqanaba lama-40 leSalathiso soMbane oMandla ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba esi sibini sikummandla wehlayo. Inokuthi iwele njengoko injalo kwindawo yokuqhubela phambili.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin isehla. I-crypto sele iwele kwi-28 ephantsi. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukuhla okuthe kratya kwexabiso ukuba inkxaso yangoku yaphuliwe. Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi ukwehla, i-crypto yehla yaya kwi-24 yeedola. Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyisela kwakhona i-28%. Oku kubonisa ukuba i-DOT inokuthi iwele kwinqanaba le-78.6 ulwandiso lweFibonacci okanye isezantsi se- $ 1.272.
I-altcoin ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili. Ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla.
IPolkadot (DOT) iwile kuluhlu lwamaxabiso asezantsi. Ukuba inkxaso iyabanjwa, intshukumo ebophelelweyo iya kuqhubeka kwakhona. I-DOT ithengisa nge- $ 30.68 ngexesha lokubhala. Ukusuka kulo lonke uphawu intshukumo eboshwe ngamanqanaba iya kuqhubeka njengoko kukho imiqondiso yokunyusa.
IPolkadot (DOT) Ngaba uBungakanani buBanzi phakathi kwe- $ 28 kunye ne- $ 40, Ukuqhekeka okanye ukuPhuka kusondele
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 40, i-$ 42, i-$ 44
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 30, $ 28, $ 26
Kwinyanga ephelileyo, IDOT ibikukuhamba-kuboshwe intshukumo ngenxa yokwaliwa kwinqanaba eliphezulu kutshanje. I-cryptocurrency ijongene nokwaliwa kwi-40 ephezulu yeedola. I-crypto iyatshintsha phakathi kwe- $ 28 kunye ne- $ 40. I-DOT iya kuphinda iqale kwakhona xa i-40 yokuxhathisa ngaphezulu kwephuliwe. Kwelinye icala, ukuba iibhere ziyaphula inkxaso eyi- $ 28, imakethi iyakwehla iye kwi-16 yeedola ezisezantsi. Okwangoku, ingqekembe inokuthi inyuke, ukuba amaxabiso e-crypto azinzile ngaphezulu komndilili ohambayo.
I-DOT-Itshathi yemihla ngemihla
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonakalisa phezulu ngaphambili. Ixabiso lechaphaza linokunyuka njengoko lingaphezulu kwee-SMAs. I-DOT ikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kubonisa ukuba isibini sikwindawo yonyuselo kwaye sinako ukunyuka siye phezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin iqale kwakhona ukuhamba okubopha phakathi kwe- $ 32 kunye ne- $ 38. Ukusukela nge-20 kaFebruwari, ixabiso beliguquka phakathi kwenqanaba elibophelelweyo. Umrhwebi oboshwe uluhlu unokuqalisa iodolo emfutshane kwinqanaba lokumelana kunye nokuphuma kufutshane nenkxaso. Kwangokunjalo, i-odolo ende inokuqalwa kwinkxaso, ngelixa uphuma usondela kwindawo yokuxhasa. Okwangoku, ixabiso liphakathi kwetshathi.
Itshati ye-4 yeyure
I-altcoin ingaphantsi kwe-80% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
IPolkadot (DOT) okwangoku ngumkhwa njengoko i-crypto iqhubeka nentshukumo ebophelelayo. Ingqekembe inokudibana kungekudala nokuphuka kwexabiso okanye ukonakala. Iinkunzi zeenkomo ziya kuba luncedo ukuba ixabiso lizinzile ngaphezulu komndilili wokuhamba.
IPolkadot (i-DOT) ikwiNdlela esecaleni, ehla phakathi kweedola ezingama-36 ukuya kuma-38 eedola
IDOT Ixabiso ngoku linamathele ngezantsi kwe- $ 38 kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo. Ingqekembe ngoku iyatshintsha phakathi kwe- $ 36 kunye ne- $ 38. Abathengi babenako ukutyhala i-crypto ukuya kuthi ga kwi-40 yeedola ephezulu kodwa abakwazanga ukuyigcina iphakanyisiwe. Ixabiso lagxothwa emva kokufikelela kwingingqi ethengiweyo. Okwangoku, ixabiso liyehla liye kumaxabiso asezantsi. Ukuba yaphula ngaphantsi kwe- $ 36 inkxaso; iya kuqhubeka iyehla iye kuma- $ 34 asezantsi. Nangona kunjalo, ukuba inkxaso engama- $ 36 iyabanjwa, i-crypto iya kuqhubeka noluhlu lokuhamba phakathi kweedola ezingama-36 kunye nama-38 eedola.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonisa phezulu. Nangona kunjalo, imarike ngoku ihamba ecaleni. I-DOT ikwinqanaba lama-60 leSalathiso saMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba isibini sikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komgca osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini saphakama saya kwi-40 yeedola ephezulu kodwa sachaswa. I-DOT yawela kwi-36 yeedola esezantsi kwaye yaqala kwakhona imeko esecaleni. Ngomhla we-11 kuMatshi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kuwela kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci okanye isezantsi se- $ 34.95 kwaye ibuye umva.
I-altcoin okwangoku ingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
IPolkadot (DOT) ngoku idibanisa phakathi kwe- $ 36 kunye ne- $ 38. Ngokwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kuqhubeka iyehla ukuya kwi-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye isezantsi se- $ 34.95. Emva koko, imali yedatha inokuqhubeka kwakhona.
I-Polkadot (DOT) Ukuhamba ngaphezulu kwe- $ 32 Inkxaso, inokuthi iqhubeke kwakhona phezulu
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 35, $ 37.50, $ 40
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 25, $ 22.50, iirandi ezingama-20
Okwangoku, Ipolka dot kukwi-uptrend. Kwi-uptrend yokuqala, ingqekembe yaphikiswa nge-40 yeedola kwaye yabuyela kwi-30 yeedola esezantsi. Abathengi batyhala ingqekembe phezulu okwesibini kwaye bagxothwa kwindawo yokumelana. I-crypto kusenokwenzeka ukuba ifumane inkxaso ngaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA. Ngomhla ka-20 kuFebruwari, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-50% yeFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kunyuka ifike kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye i-61.21 yeedola ephezulu.
Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge phezulu zibonisa phezulu. I-DOT ikwinqanaba lama-56 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba isibini sikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komgca osembindini wama-50.
Kwitshathi yemizuzu engama-30, esi sibini sihamba phantsi. Ingqekembe yawela kwi-32 yeedola ephantsi kwaye yalungiswa ngaphezulu. Ukulungiswa okuphezulu kuye kwahlala ixesha elifutshane njengoko i-crypto ibuyela ezantsi. Nangona kunjalo, ukuba ingqekembe iye yawa kwaye yaphuka ngaphantsi kwe- $ 32, uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka. Ngomhla wesihlanu kweyoKwindla; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-5%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kuwela kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci eyandisiweyo okanye isezantsi ye- $ 1.618 kwaye ibuye umva. Ukusuka kwintsebenzo yexabiso, i-DOT ixhoma ngaphezulu kwe- $ 30.05 yenkxaso yokubuyela umva okunokwenzeka.
I-DOT / i-USD-i-30-yemizuzu Itshathi yeYure
I-altcoin okwangoku ingaphantsi kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Ii-SMAs zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
IPolkadot (DOT) isabuyela emva emva kokwaliwa kwesibini kwindawo yokumelana ne- $ 40. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka kwakhona ukuba i-DOT ifumana inkxaso nokuba ngaphezulu kwe- $ 32 okanye i-30 yeedola. Kwangelo xesha, iinkunzi kufuneka zophule i-40 yokuxhathisa ngaphezulu. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-DOT inexabiso ekujoliswe kulo le- $ 61, ukuba uxinzelelo lwangoku luphuliwe.
IPolkadot (DOT) amaxabiso abuyayo, ujonge ukuphuma okuphezulu
Ukuhlaziywa: 25 Februwari 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-DOTUSD-ngoFebruwari 25
Ngexabiso lePolkadot (DOT) ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-10 ngeentsuku ezisi-7 kunye ne-0.24% ngeyure ezingama-24, onke amehlo akhangele ingqekembe ukuze ahambise ezinye iinzuzo. Emva kokuba i-DOTUSD ibuyisiwe kwinqanaba eliphantsi le-25.82 leedola isibini esijongayo sigcina ukuqhubela phambili ngaphaya kwe- $ 35.54 ephezulu yemihla ngemihla. Ngexesha lokubhala ithokheni ye-DOT ixabisa malunga ne- $ 34.00.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 42.71, $ 40.13, $ 37.24
Amanqanaba enkxaso: $ 29.34, $ 25.91, $ 23.05
I-DOTUSD yexesha elide iTrend: Ukurola
Njengoko kuqatshelwe kwitshathi yemihla ngemihla, emva kokubuyela umva kutsha nje, i-altcoin ibambe ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 25 kunye nemisele yokudambisa okulungisiweyo okubonwe kwibhodi ye-crypto kwiveki ephelileyo. Ixabiso le-DOTUSD lifunyenwe kwintengiso yokuthengisa kwaye inyuka phezulu ngethemba lokuseka i-uptrend entsha.
Ukunyuka koxinzelelo lokuthenga apha kunokuqhubela phambili ithokheni ye-DOT kwithagethi ekujolise kuyo kwi- $ 50. Abathengisi be-DOTUSD kufuneka bazi ukuba ukwaliwa nokuba kungama-36.20 eedola kunye nendawo ye-MA 5 okanye isithintelo sokumelana ne- $ 37.24 kunokuba yingozi. Ukuba oku kuyenzeka, i-DOT iya kuphinda ingene kwisigaba sokudibanisa kunye nesilayidi kwinqanaba le-78.6% yokubuyisela kwi-29.34 yeedola.
I-DOTUSD yeXesha elifutshane leNdlela: Ukulinganisa
Kwisakhelo seyure ezi-4, ixabiso le-DOTUSD liyaqhubeka nokujikeleza ii-MA 5 kunye ne-13 ngelixa i-Relative Strength Index (RSI) ihlala kakuhle phakathi phakathi kwayo, zombini ezibonisa ukudityaniswa kwamaxabiso okungakhokelela kwirally ephezulu.
Uvavanyo lwenqaku elilinganisiweyo elingaphaya kweedola ezingama-36 zeedola zihlala kumakhadi ukuba iinkunzi zeenkomo zifumene ukwamkelwa ngaphezulu kwekota ekufutshane ye-MA 5 kunye ne-13 ejikeleze inqanaba le- $ 35.00. Inqanaba le-40 leedola lezengqondo linokudlala ukuba iinkunzi zilwandisa ulawulo lwazo. Ngenye indlela, ukuxhathisa okuthe tye kwi- $ 37.24 kunokunciphisa umda wokubaleka kunye nokufaka isibini.
tags DOTUSD, Ipolka dot
Uqikelelo lwamaxabiso ePolkadot -2021 nangaphaya kwayo
Ipolka dot yiprotokholi ye-blockchain protocol edibanisa iibhloko ezininzi ezizodwa kuthungelwano olunye olumanyeneyo.
Ifana neCosmos, le yinkqubo yeetyathanga ezininzi ejolise ekukhuthazeni unxibelelwano kunye nokwanda kweebhloko ezibhloka ezinokudityaniswa kwi "Relay Chain" yayo.
Iimali ezininzi zala maxesha zenziwe kusetyenziswa ubuchwepheshe be-blockchain ukusombulula iingxaki ezithile. IPolkadot, nangona kunjalo, yasekwa ngethemba lokusombulula ingxaki ye-blockchain uqobo.
IPolkadot isebenzisa ikhonkco lokuhambisa, elisebenza njengehabhu yeparachutes ukunxibelelana nokucwangcisa ukuvumelana kunye nokutshintshiselana ngemiyalezo kunye nedatha phakathi kweeparashute ezenziweyo. Iithokheni zivumela abasebenzisi ukuba bakhe okanye bakhuphe iiparashute ezintsha.
Inethiwekhi kunye nee-blockchains ezivunyiweyo ziya kuthi zombini zidityaniswe nenkqubo. Kungenzeka ukuba imixokelelwane iya kwahlulwa phakathi kwayo yonke inkqubo kwaye idatha ingadluliselwa kwamanye amaziko kwaye ukhuseleko lwenethiwekhi luya komelezwa.
Ngexesha elithile, iPolkadot yaphakama ekuqondeni ngokuba yindawo yesihlanu enkulu ye-blockchain xa i-DOT yabetha i-ATH, eyenzeka phakathi ku-Januwari 2021.
UGavin Wood, ongumseki-mbumba we-Ethereum, waqala wazisa iPolkadot kwintengiso kwi-2016.
Isebenza njani iPolkadot (DOT)?
Inkqubo yethiyori yomdlalo wokuziphatha okuhle (i-GBG), ethi isetyenziswe yiPolkadot ngokuvuza ngokuziphatha okuhle kunye nokugweba into engalunganga, ngaloo ndlela yenza ukuba amava kube lula ukuwaqonda. Le yinto ebalulekileyo enceda ukukhuthaza ukuzimela ngaphakathi kwenethiwekhi.
Imeko-bume ayinabasebenzi basemgodini ngoko isebenza ngokukhetha ukusebenzisa ialgorithm ethile. Oku kunceda abanini ukuba babeke iliso kwizihlandlo ezizodwa ngcono kwaye benze amava abo athambekele ekubangeleni iintloko.
Uhlaziyo oluthile olubalulekileyo luye lwatyhilwa ukuba lwenziwe kamva eqongeni. Into enomdla kukuba enye yazo ibandakanya isigqibo sokutshintsha uyilo lwetyathanga.
Imali yePolkadot yedijithali (DOT)
Imali yemveli yeqonga lemali yedijithali yePolkadot yaziwa ngokuba yi-DOT. Le cryptocurrency igqwesa kwisakhono sayo sokubonelela ngezisombululo kwimiba ekwinethiwekhi:
IParachain: Igama elifutshane "lamatyathanga afanayo". Ezi blockchains zahlukeneyo ziya kusebenza kuthungelwano lwePolkadot, ngokudibeneyo.
Ukudluliswa kweseketheZonke iibhloko blockchain ziya kudityaniswa kulesekethe iphambili yePolkadot.
I-Bridge BridgeIibhulorho zetyathanga ziyilelwe ngokucacileyo ukudibanisa indalo yePolkadot nezinye iibhlokhi ezikhoyo ezinjengeBitcoin, i-Ethereum nezinye.
Ikhosi inamandla kakhulu
Ngexesha le-ICO yokuqala, ingqekembe enye yexabiso yayixabisa malunga ne- $ 30 kodwa kamva ixabiso lanyuka laya kuthi ga kwi-6 yeedola xa imali yedijithali ifunyenwe ikhutshwa ngokusesikweni. Emva kwexesha ecaleni kwendlela, yafumana ukuwa ngequbuliso okuphela kokwehlisa ixabiso lalo ukuya kwi- $ 2.81. Nangona kunjalo, inani elikhulu lamathokheni amatsha laveliswa ngexesha lokuphinda kunikwe amandla. Le nyani yaphela ibangela iPolkadot ukuba izazise ngokusesikweni kwitshathi ye-10 ye-cryptocurrency njengoko ixesha lokuphinda liqale ligqibe ukubangela ukutsiba ngesiquphe kwixabiso lalo.
Kukho izinto eziphambili eziqwalaselwe ukuba zidlale indima enkulu ekuthandeni imali ye-imali yedatha. Isikali somgaqo-nkqubo wePolkadot ngesantya esingaguquguqukiyo kwaye ngenxa yoko, asikhuphisani ngqo ne-Ethereum, enokuthi ngenxa yoko isombulule ingxaki ngemirhumo ephezulu ye-Ethereum.
Kwiiveki ezidlulileyo, ngokweeprojekthi kunye nexabiso, i-DOT ifumene ukonyuka okukhulu, oko kukuthi. Idatha eyaqokelelwa kwiPolkaProject ibonisa ukuba i-Polkadot ecosystem iqhayisa malunga neeprojekthi ezili-197 kwinethiwekhi yayo. Enye into ebaluleke kakhulu kukuba iPolkadot, ngokwezivumelwano ezifanelekileyo, izinzile njengomnye wabaphuhlisi ababalaseleyo kule ndima.
Zithini izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zokutyala imali kwiPolkadot?
Ewe, njengoko iindlela ze-cryptocurrency zibona utshintsho olukhulu ngokubhekisele kwiimali ezintsha zedijithali ezibonelela ngokusebenza okungcono xa kuthelekiswa nezakudala, iPolkadot ngokuqinisekileyo iyaqatshelwa njengenxalenye yotyelelo. Abantu abajonge ukutyala imali kwezinye ii-cryptocurrensets ezaziwayo kwintengiso ezinje BTC or ETH, usengazuza kwi-DOT njengendawo ebaluleke kakhulu.
Gavin Wood ugqwesileyo ngombono wakhe ngasemva kwemali kwaye waqinisekisa ukuba itekhnoloji yayo imi umhlaba wayo ngokuchasene nabantu abakhuphisana nabo abakhulu abanjengoEthereum, kwaye ngokunyanisekileyo, ingqina ukuba ingcono kakhulu. Ukuba ngumnatha othembekileyo oxhomekeke kwinkqubo yokuhambisa kwakhona, i-DOT ibone imakethi ye-crypto isanda ngokuya inomdla kwingqekembe.
Xa ujonga izibonelelo eziphambili, kusekho izinto ezithile ezingalunganga ekufuneka uzazi…
I-Polkadot, njengeprojekthi entsha ezayo kunye nokudibana kwahlangabezana neminye imizabalazo ebalulekileyo kwindlela yayo yokuma. Enye yazo ngokuqinisekileyo yinto yokuba itekhnoloji yayo inzima kakhulu eyenza ukuba isakhelo se-DOT sibe nzima ukusiqonda kuqala kubasebenzisi abeza kubuchwephesha be-ETH okanye i-BTC. Nangona kunjalo, owona mceli mngeni unzima kukuba iPolkadot isebenzisane nabanye abakhuphisana nabo kwimakethi ye-cryptocurrency. Abasebenzisi bayacelwa ukuba benze ibhulorho eya kwityathanga, ukuze bakwazi ukudlula iBitcoin okanye i-Ethereum, eqhubeka nobunzima kwinkqubo ebekufanele ukuba ibilula.
Ukunqongophala kwedatha kwiPolkadot yenye ingxaki ebalulekileyo njengoko isenza ukuba inkqubo yoqikelelo lwamaxabiso iphantse ibe yinto engenakwenzeka ngenxa yokungazinzi. Nangona i-DOT ithathwa njengezinzileyo ngalo mzuzu, kunokuba nzima kakhulu ukuqikelela amaxabiso ngenxa yezi nkcukacha zegrafu zincinci njengoko ingqekembe yedijithali isekhona kwiintsuku zayo zokuqala.
Uqikelelo lwamaxabiso ePolkadot (DOT) 2021
Ngoku ka Coinmarketcap Ixabiso lePolkadot okwangoku yi- $ 36.50. I-2020 ibingunyaka omkhulu kwiPolkadot njengoko i-cryptocurrency iye yafumana ukwanda okubonakalayo. Ababikezeli bezulu banethemba xa beqikelela ixabiso lePolkadot ka-2021 Iimali zedijithali IPolkadot inokufikelela phezulu njenge- $ 260.61.
Itshathi yokuqikelelwa kwexabiso kwePolkadot ye-2021. Umthombo: Digitalcoin
Ixesha elide inethemba lokuqikelela ukuba ixabiso lePolkadot linokufikelela phezulu njenge- $ 248.57 kwi-2021.
UWalletinvestor unendlela elungileyo xa eqikelela ixabiso lePolkadot le-2021.
IPolkadot 2022, 2023, 2024, 2025 kunye no-2028 uqikelelo lwamaxabiso
Ngokwezibikezelo, iPolkadot kulindeleke ukuba inyuke ngexabiso kule minyaka ilandelayo. I-Digitalcoin iqikelela ukuba iPolkadot inokufikelela kuma-471.12 eedola ngo-2022. I-Longforecast inendlela yokulondoloza xa iqikelela ixabiso lePolkadot kwixesha elide.
I-Digitalcoin inethemba ngakumbi xa isenza uqikelelo lwayo malunga ne-2025 yokuqikelela ukuba ixabiso le-DOT linokufikelela kwi-125.38 yeedola. Ngapha koko, ngokweDigitalcoin, iPolkadot inokufumana ukonyuka yonke indlela eya kwi- $ 1974 ngo-2028.
Ngaphaya koko, iingcali ikakhulu zicinga ukuba kwixa elizayo ikota ye-DOT iya kubetha ixabiso eliphezulu. AbakwaSpartan Black, ingxowa mali enkulu yaseAsia, bacinga ukuba iPolkadot (DOT) sele inethuba lokufumana imali kwaye kungekudala izakuzibona njengenye yezona zintathu zintathu ziphezulu ziimali zorhwebo.
Kukwakho nengqikelelo “ethembele kakhulu” efana naleyo iphuma kwi-Crypto Youtuber BitboyCrypto edumileyo eqikelela ukuba ixabiso lePolkadot linokubetha ama-326 eedola kulo mjikelo wenkunzi ngo-2021.
Ngaba kufuneka utyale imali kwiPolkadot? -Iingcinga zokugqibela
Ekugqibeleni ungabuza, ngaba ukutyala imali kwi-DOT kufanelekile? Kwimacandelo e-DeFi kunye ne-cryptocurrency, iPolkadot iya isanda ngamandla. Amashishini ePolkadot afezekisa ngokukhawuleza ixabiso eliphezulu ngenxa yokudityaniswa okukhawulezayo kunye nokudityaniswa okubanzi. IPolkadot ineqela elizinikeleyo ngasemva kunye nombono ocacileyo weenjongo zalo zexesha elizayo. Ngapha koko, ngokwesimo sezulu esichazwe ngasentla, iPolkadot kulindeleke ukuba inyuke ngexabiso ngonyaka ka-2021 nakwiminyaka ezayo, eyenza ukuba ibe lukhetho olulungileyo lotyalo-mali.
I-DOT / i-USD iphinda ibuyele kwiNkxaso yeedola ezingama-30, iphinde iqale kwakhona kwiXesha eliPhezulu
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 35, i-$ 37.50, i-$ 40
I-DOT / iXabiso leXabiso leXesha elide leNqanaba: Bullish
I-cryptocurrency ikwimeko entle. Ixabiso le-DOT lenza uthotho lweendawo eziphakamileyo eziphezulu kunye nezisezantsi eziphezulu. Ingqekembe okwangoku isenza phezulu phezulu ngexabiso le- $ 32.50. I-altcoin ibuyela umva ukusuka phezulu kutshanje. Ukwehla kwexabiso kutsha nje kube sisiphumo sobume bengqekembe engaphezulu. I-RSI ibonisa ukuba ixabiso alinayo indawo eyoneleyo yokuhlangana phezulu. I-uptrend iya kuphinda iqhubeke kwakhona njengoko ixabiso lingaphezulu kwee-SMAs. Namhlanje, ixabiso libuyile kwaye lafumana inkxaso ngaphezulu kwe- $ 30. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka kwakhona ukuba inkxaso yangoku ibambe. Kwicala elingaphezulu, ukuba amaxabiso ayaphula ukuxhathisa okukhoyo kwimarike iya kunyuka iye kwixabiso ekujoliswe kulo elilandelayo le- $ 45.
Umgca wendlela yokuqhubela phambili utsaliwe obonisa amanqanaba enkxaso yexabiso. I-uptrend iya kuqhubeka ukuba amaxabiso abuyela emva kwaye aqabuke ngaphezulu komgca wokuhamba. Kwelinye icala, ukuba amaxabiso ayaphuka kwaye avale ngezantsi komgaqo wendlela, i-uptrend inokuthi ipheliswe. I-DOT ikwinqanaba lama-74 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kubonisa ukuba esi sibini sikwindawo ephezulu.
I-DOT / USD Umndilili wexesha eliphakathi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini esi sihambela phezulu. NgoFebruwari 13 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liza kunyuka liye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye phezulu kweedola ezingama-45.12.
I-altcoin okwangoku ingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish ngenxa yokuwa kwexabiso kwangoko. Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
Ukunyuka kwemali ye-cryptocurrency kuyaqhubeka njengoko ixabiso lifumana inkxaso ngaphezulu kwe-30 yeedola yenkxaso. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci. Oko kukuphakama kwe- $ 45.12.
Qaphela: iLearn2Trade.com ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
Uhlalutyo lwamaxabiso ePolkadot-ngoFebruwari 2
I-21Shares, yenye yezona mveliso zorhwebo zokurhweba ngokutshintshiselana nge-imali eninzi (i-ETPs), ikhupha iPolkadot (DOT) yokuqala ye-ETP. Inkampani ibhengeze kwangoko ukuba imveliso entsha inokudweliswa kutshintshiselwano lweSwitzerland SIX ngoFebruwari 4, 2021.
I-ETP entsha iza nje emva kokuba iPolkadot yongezwe kwimveliso ephezulu ye-ETP ye-21Shares ye-Crypto Basket ETP (HODL) ngoJanuwari 29. I-HODL, elandelela ii-cryptocurrensets ezintlanu eziphezulu njengeBitcoin (BTC) kunye ne-Ethereum (ETH), sele isusile i-Bitcoin Cash ( BCH) kuluhlu lwayo kwaye uyifaka endaweni yePolkadot njengeyona ndawo yesibini ngobukhulu emva kweBitcoin.
Ngokwengxelo evela kwii-Indices ze-MVIS, iPolkadot ngoku yenza i-27% yazo zonke i-ETP, ngelixa i-BTC inika ingxelo malunga neepesenti ezingama-50 zemveliso.
Ngokwesithethi se-21Shares, inkampani ayinanto yakwenza nokudibanisa okanye ukususwa kweeasethi kwi-HODL ETP. Isithethi siqaphele ukuba olu xanduva lubekelwe izisombululo ze-MV Index.
I-21Shares iqaphele ukuba ukongezwa kwePolkadot kwi-Crypto Basket ETP yayo kuyenza "Ixesha eligqibeleleyo lokongeza i-asethi enye ye-ETP kuluhlu esele lubanzi lwe-ETPs ye-crypto" ni kezelwa.
U-CEO wale nkampani, uHany Rashwan, uqinisekisile ukuba inkampani ihlala izinikele ekufezekiseni ibango elibonwe kubatyali mali beziko.
I-DOT yiprotokholi ye-blockchain protocol, edibanisa iibhloko ezininzi ezizodwa kwinethiwekhi enye. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, imali yedatha igqithe kwiRipple (XRP) njengeyesine ngobukhulu be-crypto esekwe kwintengiso yentengiso. Nangona kunjalo, i-XRP sele ibuyisile indawo.
Ngexesha lokushicilela, i-DOT ithengisa malunga ne-80% yayo ukuya kuthi ga kumhla wayo ophakamileyo.
Amanqanaba aphambili e-DOT aBonwayo-ngoFebruwari 2
IPolkadot ibanjiwe kangangeentsuku ezimbalwa ezidlulileyo phakathi kochaso lwe-17.66 kwinkxaso ye-15.70. I-cryptocurrency izame enye ukuya kwi-17.66 yokumelana nezinye iiyure ezidlulileyo kodwa yasilela ukwaphuka ngaphezulu, kwakhona.
Oko kwathethi, i-DOT ingaqhubeka nokukhula koluhlu lwayo kwiintsuku ezizayo, ithathela ingqalelo ukuba ukungazinzi kuyaqala ukuphela. Nangona kunjalo, ukuwa okungaphantsi kwe-14.80 kubonakala kungenakulindeleka okwangoku, kubonisa ukuba iPolkadot inokuhlala kuluhlu lweentsuku ezili-17 phakathi ko-18.90 no-14.80.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 17.66, $ 18.42, kunye ne- $ 18.90. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 16.44, $ 15.70, kunye ne- $ 14.80.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.06 zezigidi
Intengo yeNtengiso yePolkadot: $ 2.49 yeebhiliyoni
Ukubusa kwePolkadot: 0.23%
tags IDOT, iindaba, Ipolka dot
← Entsha izithuba 1 ... 4 5abaDala izithuba →